Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. inogamuchira nemufaro vatengi veRwanda kuti vashanyire
Hebei Lihua Pharmaceutical inoshingaira inopindura mutemo wenyika "Belt uye Road" uye inowedzera nesimba misika yeAfrica yekunze. Mangwanani eApril 22, mutengi weRwanda kabahizi akauya kukambani yedu kuzoshanya nekukurukura nyaya dzekudyidzana. Mukuru maneja we ...
African Swine Fever Kudzivirira uye Kudzora Yekutsvagisa Chirongwa, Chinese Academy Yekurima Sayenzi (2018-2022)
ne admin pane 19-06-21
2019 Nian 5 Yue 24- Ri, Chinese Academy yeAgriculture Sayenzi yekufambira mberi kuferefeta yakazivisa "African swine fever kudzivirira uye kudzora chirongwa chekutsvaga". Mushure mekuitika kwe Africa swine fever denda, iyo Chinese Academy yeAgriculture Sayenzi t ...
I125th China Kunze uye Export Fair, Hebei Lihua Pharmaceutical Viwanda Co, Ltd. yakadzoka izere nemutoro!
ne admin pane 19-05-07
2019 Nian 5 Yue 1 zuva -5 th, 125 th China Kunze uye Export Fair yakaitirwa kuGuangzhou Pazhou Exhibition Center. Sechiitiko chekushambadzira kwenyika dzepasi rose, nzvimbo yekutumira kunze kwechiratidziro ichi inosanganisira machira nezvipfeko, mukwende, tsika nemitambo, chikafu, zvekurapa uye zvemukati ...